अबको ३ वर्षसम्म यी ४ राशि हुनेहरुको लागी फाइदै फाइदा , कतै तपाईहरु त पर्नु भएन ? (अवश्य पढनुहोस) - Experience Best News from Nepal
तपाइको भाग्यको कारणले गर्दा तपाइलाइ राम्रो र नराम्रो हुने गर्दछ ।किनभने तपाइको भविष्य तथा विवाह यही राशी अनुसारै निर्धारण गरिएको हुन्छ ।त्यसैले त कसैको विवाह गर्नु परेमा सुरुवातमा राशी नै हेराउने गरिन्छ ।यसै कारण आफ्नो राशी अनुसार तपाइको जीवन कति लाभदायक बन्ने भन्ने निर्भर रहन्छ ।
तर यी ४ राशी रहेको छ जसले अबको ३ वर्षसम्म तपाइको लाभै मात्र हुने भएको छ । ती राशीहरु हुन सिंह, कन्या, तुला र कुम्भ रहेका छन्। आजको रातको १२ बजे देखि ३ वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहने ज्योतिष शास्त्रीहरुले बताएका छन ।
यी राशीहरु भएको मानिसको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण विकार हटेर जाने देखिन्छ । अध्ययनमा सफलता हासिल गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिने भएता पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सानो–तिनो पनि लापरवाहीले दुख निम्त्याउन सक्छ ।
जीवनमा भएका विभिन्न समस्या हल हुने भएको छ । केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ ।तर यी ४ राशीको यस्तो समय भएपनि यी केही कुरामा भने ख्याल पुयाउनु पर्दछ ।त्यसैगरी यी ४ राशीहरु हेरौ । सुरुवातमा
सिंह राशी (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)
बाट उठेका राशीको मतिभ्रष्ट हुने समय छ, सचेत रहनु होला । आत्मबलमा कमी आउने छ, ।त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । हल्लाको भर पर्दा दुस्ख पाइने छ तर मिहिनेत गर्दा प्रगति हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने छ । रचनात्मक कार्यमा जुट्दा फाइदा हुने समय पनि छ । तर मन भावना, खेलवाड र कल्पनामा अल्मलिन हुन सक्छ । त्यसैगरी दोस्रो राशी रहेको छ
बाट उठेको राशीहरुमा घरायसी कामधन्दाका लागि खट्नु पर्ने छ । सन्तानपक्षको मायामा कमी आउने छ । मनोरञ्जन र खेलवाडप्रति मनको आकर्षण बढे पनि इच्छा पूरा गर्न सकिंदैन । रोमान्स र प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउने छ । दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर हुने रहेको छ । त्यसैले सचेत रहनुहोला । त्यसैगरी तेस्रो
यी बाट उठेको मानिसहरुको पनि नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा मनग्य धनलाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइने भएको छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । कृषिक्षेत्रमा भने अलि बढी परिश्रम र लगानी गर्नुपर्ला । नयाँ कारोबार वा साथीभाइबाट बढी फाइदा लिने समय रहेको जनाइएको छ त्यसैगरी चौथो राशी
को पनि यो बाट उठेकोको पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । आत्मबल बढ्ने छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । समाजसेवाका कामबाट लाभ हुनेछ ।तर माथि जे जस्तो भनिए पनि र तपाइ यो माथि लेखिएको राशी भित्र नपरेपनि तपाइ जुन राशी भएपनि तपाइले आफ्नो भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस ,तपाइको अवस्य सफल हुनुहुनेछ ।
यस्तो छ आज पौष १७ गते, मंगलबार तपाईहरुको राशिफल
आजको राशिफल : वि.सं. २०७५ भाद्र ०७ गते बिहीबार !